Umxholo woPhicotho lokuFunda
Ukuba uye wakha wacinga ngendlela ohlala ngayo eklasini, kwaye kukuhle kangakanani xa ootitshala befundisa nje kunokuba banikeze izabelo zokufunda ixesha elide, ngoko unokuba nesitayela sokufunda. Ezinye izinto zokuvala? Uyingxenye enkulu yenxaxheba. Uyamthanda umculo kunye nothando lokufunda nomculo ngakumbi. Unika kakhulu ukufumana nokufumana izikhombisi zezwi, nawe. Iyiphi indlela yokufunda yokuhlola?
Funda ngezansi ukufumanisa.
Ndibuza ukuba isitayela sakho sokufunda siphi na? Ngaba ungaqinisekanga ukuba ungathini? Unokufumana apha ukuba unalo mbuzo olula, imibuzo eyishumi!
Yiyiphi i-Auditory Learning?
Uphicotho-zincwadi zezifundo zenye yeendlela ezintathu zokufunda ezahlukeneyo ezithandwa nguNeil D. Fleming kwi-VAK yokufundisa. Umfundi ophicothiweyo uya kukhumbuza ngokuqhelekileyo oko utitshala athethayo kwaye uya kuba ngumcebisi othandekayo kwixesha elide nje kuphela ukuba amandla omntu alolu hlobo angayifumani endleleni. Abantu abavame ukuthanda olu hlobo lokufunda bahlala be-butterflies zentlalo eklasini kwaye banokuphazamiseka lula ngabo bajikelezayo. Nangona abaphulaphula kakhulu, banokungena kuyo yonke into eyenziwa eklasini, kwakhona.
Amandla oPhicotho lwaBafundi
Ukususela kwi-kindergarten ukuya kwi-classus, abafundi abaphicothiweyo baya kuba ngamalungu amaninzi asebenzisanayo nabamkelekileyo naluphi na uhlobo lweklasi lokufundela.
Abo baneendlela zokufunda eziphicothiweyo bathanda ukuthetha nokuva abanye bathetha ukuze bafunde okusemgangathweni, kodwa banokuba neengxaki zokufunda ngokulumkileyo kwaye bahlale behlala eklasini elithule ngokupheleleyo. Nazi ezinye izixhobo zolu hlobo lokufunda ezilandelwa iindlela zokugcina ezi ntlobo zabafundi zijoliswe kwiklasi:
Inkulu ekuchazeni iingcamango
Ukuqonda utshintsho oluthile kwi tone ngelizwi lomntu
Ukubhala iimpendulo kwiintetho
Ukulungisa iingxaki ezinzima
Ukuthatha inxaxheba kwingxoxo yeklasi
Ukukhuthaza ukuziphatha kwabanye abafundi
IziCwangciso zoPhicotho zeZifundo zabaFundi
Ngaba ukrokrela ukuba ungumfundi ophicothiweyo? Ukuba uyenzeka ukuba uthwale isitayela sokufunda okanye uyisebenzise ngokubambisana nomnye, unokufumana ezi zinto zilandelayo zicinge xa ​​ufunda okanye uhleli kwiklasi. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nocwangciso lokufunda ngokuphicotha.
Dlala umculo weklastiki kwimvelaphi xa ufunda ngaphandle nje ukuba ayikho i-lyric. Uza kugxininisa kakhulu kumazwi esikhundleni sakho sencwadi yesifundo, ngaphandle koko. Nantsi imithombo engama-50 emininzi yeengoma ezingenakucala ukukunceda uhlale ugxile!
Ukufundisisa kumaqela okanye kunye nomlingani othembekileyo ngokufundisana ngokuvakalayo malunga nemibuzo.
Funda izabelo ngokuvakalayo ekamelweni lakho okanye ngokuzenzekelayo ukuya kwilayibrari okanye kwindawo yokuzola.
Buza uthisha wakho ukuba unako ukurekhoda iintetho ukuphulaphula kamva.
Ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeklasi kangangoko kunokwenzeka. Khuthaza abanye abafundi xa bethetha ukuze abanye bazive bekhululekile njengoko ukhuluma phambi kweqela.
Hlala kufuphi nephambi kwegumbi ukuze ukwazi ukuphulaphula kakhulu.
Funda amaqiniso ngokuphinda ufunde.
IziCwangciso zoPhicotho zeZifundo zoTitshala
Abafundi bakho abanesicatshulwa sokufunda, malunga neepesenti ezingama-20 zeklasini yakho, kuya kubakho iiflefle zentlalo, ngoko kubalulekile ukuba basebenzise kakuhle amandla abo ngenkqubela ekunciphiseni imfuneko yabo yexesha loluntu ngexesha lokufundisa.
Zama ezi zicwangciso zokufikelela abo bafundi ngenkqubo yokufunda ephicothiweyo:
Biza kubafundi abaphicothiweyo ukuphendula imibuzo
Ngethuba leengxoxo, cela abafundi bakho abaphicothiweyo ukuba baphinde baphinde bacinge ngamagama ngamazwi abo.
Vumela nawuphi na umfundi onobuchule obunzima ukuba athathe umlomo ngomlomo endaweni ebhaliweyo.
Ukwahlula izicwangciso zakho zokufundisa ukubandakanya iintetho, ukufundwa okubiniweyo, umsebenzi weqela, iimvavanyo, iiprojekthi, imidlalo, njl. Ukugcina abafundi abaphicothiweyo kwizinto zabo zentlalo.
Ukuthatha inxaxheba eklasini
Ngaba abafundi bakho abaphicothiweyo banikela iintetho ngezihloko ezicetywayo
Qwalasela ilizwi lakho ithoni, ukuchithwa, kunye nolwimi lomzimba ngexesha leentetho.
Vumela abafundi abanomxholo wokufunda wokuhlola ukuphulaphula umculo ovunyiweyo xa befunda kwiklasi.
Ngaba Unako Ukuxela Kule Boozy Memes Ngewayini?
Izindlela Zokukholisa Umqeshi Wakho Ukuhlawula Imfundo Yakho
Kutheni Kwafuneka I-Ancestor Yami Yitshintshe Igama Lakhe?
Izibambiso zesiLwimi zesiLatin: I-Scoprire
IFleet White White: USS Ohio (BB-12)
Abaculi beMculo beRomatic
Sennelier Extra Past Soft
I-LINCOLN - Igama lomnqophiso kunye nomlando weNtsapho
I-Crucible - Umcebisi onzima
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'Ukuthatha'
Yintoni i-Melodic Death Metal?